म विरुद्ध घेराबन्दी भयाे तर राजीनामा दिन्न : प्रधानमन्‍त्री ओली | NayaMedia
मङ्ल, बैशाख १६, २०७७ (April 28, 2020, 6:45 am) मा प्रकाशित
जे सुकै अवस्था आइ लागे पनि सामना गर्ने तयारी गर्न सांसदलाई निर्देशन
प्रतिनिधि सभामा नेकपामा १७४ सांसद छन्। ओली पक्षका झण्डै ७५ जना सांसद खुलेको बुझाइ बालुवाटारको छ। संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन ओलीलाई थप ८८ जना सांसदले साथ दिनु पर्छ। ओली १० देखि १५ सांसद दाहाल र नेपाल पक्षबाट तान्न सकिने विश्वासमा छन्। दाहालसँग ५३ र नेपालसँग ४० देखि ४५ जना सांसद छन्। अन्नपूर्ण
घेराबन्दी नेकपा विवाद प्रधानमन्त्री राजीनामा
मङ्ल, बैशाख १६, २०७७ (April 28, 2020, 6:45 am) मा Naya Media द्वारा भिजन टेष्ट अन्तर्गत प्रकाशित
One response to “म विरुद्ध घेराबन्दी भयाे तर राजीनामा दिन्न : प्रधानमन्‍त्री ओली”
प्रधानमन्त्री ज्यूले संसद राई ले भने जस्तो भने जस्तो लाग्दैन । किनकि उहाँ लाई ससर्वसमत बाट छानेर पठाउनु भएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ हरुको बीचमा लामो सम्बन्ध भएको इतिहासले पनि देखाउँछ ! तर अहिले विगत ६-७ महिना देखि उहाँहरुको बीचमा यानी पार्टीमा छलफल नभएको होकी भन्ने देखिन्छ ! सायद बिरामी भएर होकी? र मन्त्रिमण्डल भित्र आफूलाई बढी विश्वास लागेका व्यक्तिहरू संग मात्र छलफल गरेर निर्णय लिएर होकी ! उहाँ अहिले विवादमा पर्दै आउनु भएको छ ! यो हो भने प्रधानमन्त्री र नेकपाको लागि पनि धेरै नराम्रो असर पर्छ ! त्यसैले समयमानै विचार पुर्याई पाइला चाल्नु भएमा नेकपा लाई अझ दरो बनाउन सकिन्छ !